by Thant Sin | Nov 14, 2017 | Development |
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Web Design တွေဖန်တီးဖို့ ဘာတွေလေ့လာရမလဲ ဆိုတာမပြောခင် ခုမှ စလေ့လာတဲ့ လူတွေ မှားမှားပြီး လာမေးနေတဲ့အကြောင်းတွေကို နည်းနည်း ပြောချင်ပါတယ်။
တော်တော်များများ မှားကြတာက HTML, CSS နဲ့ Photoshop လို၊ Illustrator လိုမျိုး Design Software တွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးတက်ရင် Web Designer တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပြီလို့ထင်နေတာပါ။ အဲ့ဒါတွေကို Web Design တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ မသုံးလို့လား လို့မေးရင်တော့ သုံးပါတယ်လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေသုံးတတ်ရုံနဲ့ Web Designer တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကတော့ တော်တော်ကို လွဲပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါတွေဟာ ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ Tool တွေမျှသာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ တစ်နည်း ပြောရရင် စုတ်တံကိုင်တက်ရုံနဲ့ ပန်းချီဆရာ မဖြစ်သလိုပဲ အဲ့ဒါတွေကို နားလည်တက်ကျွမ်း ရုံံလောက်နဲ့တော့ တကယ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ Web Designer ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုမှားကြတာကတော့ Web Design မှာ အသုံးများတဲ့ Grid Layout တွေ၊ Bootstrap လို Framework တွေကို သုံးတက်ရင် Web Designer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ကြတာပါ။ မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင် မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Grid Layout လို Web Design ဆိုတာတွေမပေါ်ခင် ပဝေသဏီ ကတည်းကရှိနေတဲ့ Design Theory နဲ့ Bootstrap လို UI Framework ကို ပေါင်းပြီး ပြောနေကြတာကဆိုးတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကို သေချာမေးကြည့်ရင် Design မှာ Grid ရဲ့ အရေးပါပုံကို သေချာနားလည်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Bootstrap လို Framework တွေသုံးပြီး row တွေ၊ column တွေနဲ့ Layout ချတက်ရင် Web Designer ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်နေတာပါ။
အဲ့လိုဆိုရင် ဘာတွေလေ့လာမှ Web Designer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Web Design ကောင်းကောင်းတွေဆွဲနိုင်မှာလဲပေါ့?
ဒီနေရာမှာ ဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတာမပြောခင် Web Design ကောင်းတယ်မကောင်းဘူး ဆိုတာ ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတာ နည်းနည်းအရင်ပြောချင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Post မှာပါတဲ့ အချဉ်ပုလင်းနှစ်ခုပုံကို နည်းနည်းအချိန်ပေးပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ နှစ်ခုလုံးမှာ တူညီတဲ့ အဆင်အပြင် တွေသုံးထားပေမယ့် ဘယ်ဘက်က ပုလင်းရဲ့ အဖုံးက ပုံမှန် အတိုင်း အပေါ်မှာရှိပြီး ညာဘက်က ပုလင်းရဲ့ အဖုံးကတော့ အောက်ဘက်မှာရှိပါတယ်။ အကျိုးဆက်က ဘာလဲဆို တော့ အပေါ်မှာ အဖုံးပါတဲ့ ပုလင်းကို သုံးရင် သုံးခါနီးတိုင်း ပုလင်းကို ဇောက်ထိုးထောင်ပြီး အားနဲ့ဆောင့်ချရမယ်၊ အချဉ်နည်းလာလေ ပိုခက်လေဖြစ်မယ်။ အဖုံး အောက်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ ပုလင်းကိုသုံးရင်တော့ အချဉ်နောက်ဆုံး ဖင်ကပ်လောက်ပဲ ကျန်လည်း အဖုံးဖွင့်ပြီး နည်းနည်း လှုပ်ချလိုက်တာနဲ့ကျလာမယ်။
ရလဒ်ကတော့ အသွင်အပြင်ချင်း ဘာမှသိပ်မကွာခြားပေမဲ့ အောက်ဖက်မှာ အဖုံးရှိတဲ့ ပုလင်းက အသုံးပြုရအများကြီး ပိုလွယ်တယ်။ အချဉ်လေးနည်းနည်းလိုချင်တိုင်း အင်အားသုံးနေရတာထက်စာရင် အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ ကျလာတာက အများကြီး ပိုအဆင်ပြေ တယ်မဟုတ်လား။
ကောင်းမွန်တဲ့ Web Design ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ၊ အမြင်လှရုံလောက်သာ မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်၊ ဘယ်အချိန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုတဲ့လူက လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သူလိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကို ရပြီး စိတ်ကျေနပ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ရပါတယ်။ Steve Jobs ကြီးကတော့ အဲ့လို ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works” လို့ဆိုသဗျ။ သဘောကတော့ “ဒီဇိုင်းဆိုတာ အပြင်ပန်း အမြင်မျှသာမဟုတ်၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ဖြစ်တယ်” ပေါ့။
အခုလိုမျိုး ဒီဇိုင်းတစ်ခု ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ အပြင်ပန်းအပြင်ဆင်လောက်ကိုသာ မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုသူတွေ အဆင်ပြေဖို့ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာကို UX (User Experience Design) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ UX ဟာ Web Design မှာမှမဟုတ်ပါဘူး၊ App Design ဘာညာ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ UX နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်က ကျွန်တော်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ ညီတစ်ယောက်ကတော့ ဒီလိုပြောတယ်။ “ကောင်းမွန်တဲ့ Design ဆိုတာ အိမ်ထောင်မှုနိုင်နင်းပြီး အပြုအစု ကောင်းတဲ့ မိန်းမကိုယူထားရသလိုပဲတဲ့၊ သူက မော်ဒယ်တွေလို အရမ်းလှ နေတာမျိုးတော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူက အားလုံးကို ပိုပြီး သာယာ ပြည့်စုံလာအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်” တဲ့။
သိပ်သေချာတာတစ်ခုကတော့ အဲ့လို ဒီဇိုင်းကောင်းတွေရဖို့ HTML, CSS, Photoshop, Bootstrap စတာတွေ သုံးတက်ရုံလောက်နဲ့ မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲ့လိုဆို ဒီဇိုင်းကောင်းတွေရဖို့ လက်တွေ့ကျကျမှာ ဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတာကို ဆက်ပြောပြပါမယ်။
အခြေခံကတော့ Typography, Color Theory, Spacing စတာတွေကို သေသေချာချာလေ့လာပါ။ Web Design ဆိုတာ Design ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကြီးရဲ့ အခွဲတစ်ခုပဲဖြစ်တာမို့ Design ရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာထားဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး Web Site တွေမှာ တစ်မူထူးတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို အသုံးပြုပုံတွေကိုလေ့လာပါ။ Web Design မှာ ဓါတ်ပုံသုံးတာက ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာ ဓါတ်ပုံသုံးတာမျိုးနဲ့ မတူပါဘူး။ သူ့မှာ သူ့ နည်းတွေနဲ့ သူရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ပထမပိုင်းကဟာတွေလေ့လာလို့ နည်းနည်းအသားကျလာပြီဆိုရင် Responsive Design နဲ့ UI/UX Design ကိုတွဲလေ့လာပါ။ (ဒီမှာ စာသိပ်ရှည်နေမှာစိုးလို့ ဘာကြောင့် UI/UX Design နဲ့ Responsive Design ကို တွဲလေ့လာခိုင်းရလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မပြောတော့ပါဘူး၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိရင် နောက်ကြုံမှ သပ်သပ်ရေးပေးပါ့မယ်)။
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ UX ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတက်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်အားထုတ်ပြီးလေ့လာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် “The Design of Everyday Things” နဲ့ “Don’t Make Me Think” ဆိုတဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါလို့လည်း ညွှန်းပါတယ်။
အမြင်လှရုံလောက်သာမဟုတ်ဘဲ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ အသုံးပြုသူတွေကို အဆင်ပြေ စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကောင်းတွေဖန်တီးနိုင်ကြပါစေဗျာ။